नागरिकको चिन्ता छैन, प्रतिमा बनाउन जनप्रतिनिधिकाे होड – Dailny NpNews
नागरिकको चिन्ता छैन, प्रतिमा बनाउन जनप्रतिनिधिकाे होड
प्रकाशित मिति: शनिबार, साउन ३०, २०७८ समय: २०:१२:०३
काठमाडौं । हालैमात्र उदयपुरको बेलका नगरपालिकाले ५८ लाख रुपैयाँ खर्चेर बराह (बँदेल) को प्रतिमा बनायो । यो प्रतिमा अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल छ । लाखौं खर्चेर यस्तो प्रतिमा बनाउनु कति आवश्यक हो? नागरिकको सेवा सुविधा र पूर्वाधार निर्माणलाई बेवास्ता गरेर यस्ता प्रतिमामा लगानी गर्नु कति उपयुक्त हो ? जस्ता कोणबाट बहस भइरहेका छन् भने कतिपयले यसलाई संघीयतामा स्थानीय तहको कार्यप्रणाली माथि प्रश्न उठाउँदै आलोचना गरिरहेका छन् ।
बेलका नगरपालिका वडा नं. ७ स्थित मैनामैनी मूलगाउँमा निर्मित यो प्रतिमाका सम्बन्धमा नगरपालिकाले सांस्कृतिक तर्क अघि सारेको छ । बँदेलको यो प्रतिमा विष्णु भगवानको तेस्रो अवतार बराहसँग सम्बन्धित रहेको नगरपालिकाका मेयर दुर्गाकुमार थापाले बताए ।प्रतिमा खडा गरिएको स्थानबाट बराह उफ्रेर वर्तमान बराह क्षेत्र प्रवेश गरेको मान्यताबाट प्रेरित भएर बनाइएको यो मूर्तिले हिन्दू र किराँतलाई जोडेको विश्वास रहेको उनी बताउँछन् ।
नगरपालिकाको सांस्कृतिक महत्व झल्काउन प्रतिमा बनाइएको मेयर थापाले बताए । बेलका नगरपालिकाद्धारा निर्मित बराहको यो प्रतिमा त पछिल्लो उदाहरणमात्र हो । संस्कृति र उत्पादन झल्काउने नाममा यतिबेला चोक–चोकमा यस्ता प्रतिमा बनाउने होडबाजी नै चलेको छ । स्थानीय तह आफैंमा स्वायत्त सरकार भए पछि त खर्च व्यवस्थापन पनि सहज हुने नै भयो । कतै सांस्कृतिक महत्व त कतै उत्पादकत्वका आधारमा चोकचोकमा तरकारी, फलफूल, जनावरका प्रतिमाहरू ठडिन थालेका छन् ।
धनकुटा जिल्लामा मात्रै यतिबेला ७ वटा यस्ता प्रतिमा बनेका छन् । यी प्रतिमा निर्माणमामात्रै ६९ लाख ३० हजार रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च गरिएको छ । भ्यूटावर र पार्क हुँदै अहिले स्थानीय तहहरूमा प्रतिमा बनाउने होड चलेको छ । उत्पादन र संस्कृति झल्काउँदै पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने नाममा स्थानीय तहहरूले लाखौं बजेट खर्चेर यस्ता प्रतिमा खडा गरिहेका छन् ।
देशासिकी र अनुत्पादक क्षेत्रमा यसरी लगानी गरिरहँदा स्थानीय तहहरूमा नागरिकलाई सेवा र सुविधा मिल्ने विकास र पूर्वाधारको स्थिति भने नाजुक छ । राम्रो कृषि उत्पादन हुने स्थानीय तहहरूलेसमेत आफ्ना उत्पादन वृद्धि र बजारीकरण गरी नागरिकको जीवन स्तर उकास्नेतर्फ भन्दा प्रतिमा बनाएर फजुल खर्च गरिरहेका छन् । यसको उदाहरणका रुपमा धनकुटालाई नै लिन सकिन्छ । यो जिल्ला सुन्तला उत्पादनका लागि उर्वर भूमि हो । यहाँ फल्ने सुन्तलालाई नेपालकै गुणस्तरीय उत्पादन मानिन्छ । विस्तृतमा नेपाल वाचमा खबर छ ।